Odinga oo doorashada Kenya kula loolami doono Kenyatta - BBC News Somali
Image caption Raila Odinga iyo ku xigeenkiisa Kalonzo Misyoka
Isbahaysiga ugu weyn mucaaradka waddanka Kenya ayaa musharaxiisa madaxtinimo u magacaabay Raila Odinga oo xilka kula tartami doona madaxweynaha haatan xilka haya ee Uhuru Kenyatta, doorashada guud ee la qaban doono bisha Agoosto ee soo socota.
Iyadoo 102 maalmood oo kaliya ay ka hartay doorashada guud ayaa isbahaysiga ugu weyn mucaaradka Kenya ee NASA waxaa ka sii dhammaanayay wakhtigii ay ahayd in uu ku shaaciyo qofka musharaxa u noqonaya.
Shanta nin ee ugu sareeysa isbahaysigan ayaa mid kaste wuxuu doonayay in uu isagu noqdo hoggaamiyaha isbahaysigan NASA, balse guddiga soo xulaya hoggaamiyaha isbahaysigan ayaa soo magacaabay Raila Odinga.
Raila ayaa ah hoggaamiyaha xisbiga ODM oo ah xisbiga mucaaradka ugu weyn marka la eego tirada kuraasta uu baarlamaanka ku leeyahay.
Magacaabidda Raila ayaa ka dhigan in markii afaraad uu Raila u tartamo xilkan madaxweynenimada, wuxuuna wali ku adkeysanayaa in uu ku guuleystay doorashadii 2007-dii ee lagu murmay, kaddib markii guddiga doorashada uu ku dhawaaqay in Mwai Kibaki uu ku guuleytay, arrintaasi oo ay rabshado ka dhasheen ayna ku dhinteen in ka badan kun qof.
Dhanka kale, doorashada isreeb-reebka xisbiyada gudahooda ayaa waxaa xilalkoodi ku waayay shakhsiyaad caan ka ah dalka, arrintaa oo ka dhigan in uu miro dhal noqday olole loogu magac daray saara dhammaantood oo ay wadeen dadka reer Kenya ee isticmaala baraha xiriirka bulshada.
Kenya oo dhoofin doonta shidaal
Sawirro: Dadka Kenya oo cuntada la wadaagaya xoolaha
Koronto la'aan ka dhacday Kenya inteeda badan
Dadka wada ololahan ayaa waxa ay codbixiyeyaasha ugu baaqayeen in aan mar kale dib loo soo dooran siyaasiinta hadda xilalka haya, si loo muujiyo sida looga xun yahay qaabka dalka loo maamulayay afartii sano ee la soo dhaafay.
Waxaa jiray rabshado ka dhacay qaybo badan oo dalka ka tirsan iyo sidoo kale eedeymo ah in codadka la kala iibsanayay isla markaana ay jirtay ku shubasho lagu shubanayo codbixinta.
Haweeney baadariyad ah oo u tartameysay in ay noqoto barasaabka caasimadda Nairobi ayaa xabsiga la dhigay kaddib markii lagu soo eedeeyay in ay fowdo ka billowday goob ay cod bixin ka socotay shalay oo Arbaca ahayd.
Doorashadan isreeb-reebka ee xisbiyada gudahooda ayaa rasmiyan lagu wadaa in la soo gaba-gabeeyo maalinta Axadda ah ee soo socota.